खोपको ट्रायलपछि औषधि पनि नेपालमै बनाउनुपर्छ: डा. प्रदिप ज्ञवाली - Nepal’s First News Agency
काठमाडौं, भदौ १३ गते । बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपालमा चीनको कम्पनी वालभ्याक्सको एमआरएनए भ्याक्सिनलाई नेपालमा परीक्षण गर्न दिने अनुमति दिएको छ । योसँगै नेपालको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले बिपी कोइराला इस्टलभेन्स साइन्सेज धरानमा परीक्षण गर्दैछ । भ्याक्सिनको ट्रायल (परीक्षण) नेपालमै हुने भनेपछि विभिन्न कौतुहलता पैदा भएका छन् । आखिर के हो त मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपालमा परीक्षण गर्न अनुमति दिएको एमआरएनए भ्याक्सिन ? यसले के गर्छ ? कस्तो किसिमको भ्याक्सिन हो यो ? भन्ने बारेमा न्यूज एजेन्सी नेपालले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदिप ज्ञवालीसँग यसै सन्दर्भमा आधारित रहेर गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यस्तो छ ।
यस्तै हामीले ट्रायल गर्न पायौँ, ट्रायल भनेको साइन्स हो, एउटा साइन्स डेभलप (विकास) गर्दा जहिले पनि लाभ मात्र खोजेर हुँदैन । हामीले भ्याक्सिन ट्रायल शुरु गर्नु भनेको क्यापासिटी (क्षमता) विकास गर्नु हो । क्यापासिटीपछि साइट डेभलप हुन्छ, त्यहाँ रिसर्चहरु हुन्छन्, त्यहाँको ट्रेनिङका कुराहरु हुन्छन् । एउटा अनुभवका कुरा भइसकेपछि अरु ट्रायल गर्दा सहजै काम गर्छौं । भोलि प्रोडक्शन गर्नको लागि पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ । ट्रायल गरिसकेपछि एउटा अहिले के फाइदा छ भने उसले नेपालमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्छु भनेको छ । त्यही क्रममा म आफैँ पनि संलग्न भएँ, अर्थमन्त्रालय हुँदै उद्योग मन्त्रालयमा एउटा कमिटी बनेको थियो । त्यो कमिटीमा एउटा प्राविधिक संयोजक भएर काम गरेँ । सरकारले नेपालमा भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ । त्यो ड्राफ्टमा हामीले काम गरेका थियौँ । यसमा राज्यले भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई के के सुविधा दिनसक्छ, राज्यले उत्पादन गर्दा वा प्राइभेट (निजी)ले उत्पादन गर्दा जग्गा, बाटो जान दिने कुरा होला, बिजुली दिने कुरा होला, ट्याक्सहरु घटाउने कुरा होला, राज्यले किनिदिनुपर्ने कुरा होला क्वालिटी (गुणस्तर) भयो भने । अर्को प्राविधिक हिसावले रिसर्च गरिसकेपछि प्रोडक्शन (उत्पादन) गर्दा, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ । नीति कार्यक्रम पास भइसकेको छ । त्यसमा भ्याक्सिन उत्पादनसम्म पुग्नलाई रिसर्चमा के के फ्यासालिटी चाहिन्छ ?भन्ने कुरा राज्यले गरिदिने भनिसकेको छ । पूर्वाधार भए र कम्पनी पनि इच्छुक भएर आउँदा अर्बौं लगानी र वर्षौं समय लाग्छ, यसको राम्रो पक्ष के छ भने चाइनाबाट २० औँ वर्ष यो कम्पनी भ्याक्सिन उत्पादन गरेको कम्पनी हो । त्यसैले कम्पनीमा प्रश्न छैन । अहिले कम्पनीले र म्याटल (कच्चा पदार्थ) उत्पादन भएको छ नि । मैले अस्ति पनि सचिवलाई भनेको थिएँ, भ्याक्सिनको कार्यविधि बनाइसकेपछि अब ड्रग (भ्याक्सिन) र म्याटल नेपालमा उत्पादन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । उहाँहरु पनि सहमत हुनुभएको छ । त्यसलाई राज्यले के के नीति बनाउनु पर्छ र कानून कहाँ खुल्ला गरेर सजिलो गर्नुपर्छ ?यसमा छलफल गर्दैछौँ । यो स्टेप (चरण) बाट हामी नेपालमा भ्याक्सिन ट्रायल गर्नुपर्छ भनेको १ वर्ष भयो, ट्रायल किन भन्ने कुरा राज्यले सुनेको छ, यसमा विशेष गरी नेपाल सरकार, क्याबिनेट र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । कम्तिमा यो शुरुवात भएको छ । यो पनि ठूलो कुरा हो । शुरु नगरीकन अघि बढ्दैन । यसमा र्यूमरको हिसावले काम गरेर मात्र हुँदैन, साइन्स बुझ्न जरुरी छ । अब हामीले भ्याक्सिन ट्रायल मार्फत् उत्पादन गर्ने यसबाट पाठ सिकेर औषधि पनि नेपालमै बनाउने गरी जानुपर्छ ।